Semalt Expert: Sei Backlinks Inobatsira Your SEO Campaign
Mune bhizimusi chero ripi zvaro rekutsvaga, kutsvaga injini yekufambisa kunokosha kuIndaneti uchapupu hunoonekwapamwe nekuwedzera kuvimbika uye kutendeuka. Nokuda kweizvi nezvimwe zvikonzero zvakawanda, kusarudzwa kunofanirwa kunge kunofanirwa kune chero ipi zvayo yevatengesi ve digitalvanoda kuongorora SEO. Maererano nehuwandu hwezvinhu zveGoogle hunobudiswa neSearchmetrics, zvinhu zvinoshandiswa neGoogle zvigadzirishenikunzvimbo dzepamusoro dzinosanganisira kuwirirana kwehuwandu uye chiremera, zvekugadzira uye webhutani zvinhu zvewebsite yako, zviratidzo zvemashandisi kubva kuGoogle zviri mukatiKuziva uye kutonga kumashure.
Zvisinei, kuongorora kwakadzama kweimwe mawebsite anoshanda mazuva ano angaratidza zvachosezvakasiyana-siyana. Nemuenzaniso, pane imwe nheyo yemashoko anokosha, hutano uye huwandu hwehutano hahurevi chinzvimbo cheGoogleinofanana newe. Semuenzaniso, mawebsite ane mashoma masangano angave akakwirira kupfuura aya ane backlinks akasimba.
Searchmetrics inoshuma kuti munguva yakareba, backlinks dzave dzichirasika sechinyoreswachikonzero seGoogle zvigadziri nhasi chinosarudza zvimwe zvinhu. Iko kushanduka kunoitika kubva pakusimudzirwa kwemashoko ezveshambadziro. Zvemagariro evanhu vane zvakawandakugoverana zvigaro zvinogona kuita kumira kwakanaka kwehutano hwepamusoro. Nekudaro, backlinks haisi iyo yepamusoro sezvaisimbovakare. Izvo zvinongova chikonzero chekuputsa tayi panguva yekuchengetedza nzvimbo.
Jack Miller, Mutungamiri Mukuru Muchengeti weChishanu Semalt ,inokurukura kukosha kwekudzokera shure kune imwechete yeSeO campaign.
Zvakagadziriswa uye Shanduro yekushandisa
Google inotaura kuti chimwe chezvinhu zvinonyanya kukosha paunenge uchiita SEOcontent relevance. Ichi ndicho chinoshandiswa nehuwandu hwauri kuisa pawebsite yako kumushandi kwete kungoita tani yemigwagwa. Thekukosha kwezvakagadzikana kunobva pa keywords search. Google bots inogona kuonawo mikana yemunhu anoshandisa mamiriro ezvinhu aya. Nhemachifeve SEO tricks se keyword stuffing haisisiri basa uye Google inotsvaga mawebhusayithi akadaro munyaya yemazuva.
Chinangwa chekushandura chinoenderana nemashandisiro anoita mushumiri nemashoko akakodzera mutsvaga mhinduro. Yakanaka bhait-uye-switch-tactics yekuwana migwagwa yakawanda ikozvino yakabata kuitira kushandisa chero kupi zvako kwakakodzera kweGoogle algorithm,zvichiita kuti sangano rose ikozvino rive rakagadzirwa. Google inopa mazano kune vatengesi vekutengesa kuti vatange kuenzanisa pakati pehuwandu hwehutano nemushandisikugutsikana, kwete kungowanika mazwi.
Maumbirwo ewebsite yewebsite haafaniri kunge ane zvikanganiso uye zvikwata. Nzvimbo yacho inofanira kuvanekukurumidza zvakakwana uye kubvuma kushanda pane zvigadzirwa zvakasiyana-siyana, maitiro ekushandura mumabheji akasiyana-siyana. Google algorithm mubayiro wewebsite neinofarira kushandiswa kwekombiyuta inoshandiswa kuburikidza nehutano Zvimwe zvinhu zvehutano zvakadai sewebsite yakakurumidza, faira faira, mukati mokubatanidza, uye HTTPSKubata kunotanga kushanda pakabatanidza teknolojia ne SEO nekubatanidza.
Mukushambadzira kwema digital, SEO inoshandiswa inoumba musana wekuvapo kwe-inthanethi uyedigital branding. Kudzorera shure ndeimwe yenzira dze SEO dzave dzichiita magic kana dzichishandisa mawebsite. Zvisinei, nevezvinokuchinja kunzira yeGoogle gadzirisiti inoshandisa, zvimwe zvinhu zvakadai semitemo yeHTTPS, mazano ekufambisa kwemafoni, kukosha kwehupenyu uye zvekugaraKushambadzira kwezvinobudisa nhau kunowanikwa. Kaka-click, rates, keywords, uye nzira dzakadai sebhait-uye-switch hazvizoshandi uye dzinogonazvinokonzera ku SEO chirango. Nekudaro, kudzokera shure hakusiwo chikonzero chekuisa mutoro wakawanda kana iwe uchida kuita sangano reSeO rakasiyana Source .